धनी व्यक्तिको मायामा पर्छन् यी राशिका व्यक्तिहरु, बैँक ब्यालेन्स हेरेर गर्छन् प्रेम !! | सुदुरपश्चिम खबर
धनी व्यक्तिको मायामा पर्छन् यी राशिका व्यक्तिहरु, बैँक ब्यालेन्स हेरेर गर्छन् प्रेम !!
भनिन्छ कि प्रेम कुनै लोभ, लगाव बिना गरिएको हुन्छ। त्यहाँ माया गर्न को लागी कुनै कारण छैन, तर कहिले काहिँ यो गलत साबित हुन्छ।यहाँ केहि मानिसहरु छन् जो केवल लोभ र लगाव को कारण माया मा पर्छन्। यसमा सबैभन्दा ठूलो लोभ पैसा र धन हो।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार, केहि राशिहरु छन्, जो केवल पैसा को लागी प्रेममा पर्छन्। यस्तो स्थिति मा, आज यस लेख मा हामी केहि यस्ता राशिका मानिसहरु को बारे मा बताउन गइरहेका छौं, जसले माया केवल पैसा को लागी गर्दछन् । वास्तवमा, उनीहरुको माया को आधार पैसा हो। आउनुहोस् जानौँ, आखिर, कुन राशिको संकेत यस सूची मा शामिल छन् त ?
वृष को शासक ग्रह शुक्र हो। यिनीहरु विलासी जीवनशैली र विलासिताको जीवन मन पराउँछन्। यिनीहरु लाई मात्र आफ्नो जीवन मा सबै भन्दा राम्रो चीजहरु मनपर्छ। साथै, यस राशिका मानिसहरु आफैंलाई समय को कठिन मा पनी बलियो राख्छन् र हरेक पल रमाउन मन पराउँछन्।
यस राशिका मानिसहरुमा एक राम्रो साथी खोज्ने सबै भन्दा राम्रो कला हुन्छ। यिनीहरु हतारमा आफ्नो पार्टनर खोज्न गल्ती गर्दैनन्, यिनीहरु ध्यान दिएर सोचे पछि मात्र आफ्नो जीवन साथी छनोट गर्दछन् । ठिक छ, जब यो एक सम्बन्ध मा पैसा को लागी आउँछ, यिनीहरु सधैं पैसा र धन को लागी आफ्नो कम्र्फट जोन बाट बाहिर आउनका को लागी तयार हुन्छन्।
सिंह राशि को शासक ग्रह सूर्य हो र यी मानिसहरु केवल देआउनका लागी माया गर्छन्। यिनीहरु क्यामेराको अगाडि आउन, टिभीमा आउन, प्रदर्शन गर्न मन पराउँछन्। साथै, यिनीहरु सधैं सम्बन्ध मा लक्जरी र आराम चीजहरु मनपराउँछन् । यस्तो स्थिति मा, यो सम्बन्ध जस्तै हो, तर एक लक्जरी तरीका मा भन्नु गलत हुनेछैन।
यिनीहरु सधैं एउटा यस्तो पार्टनरको खोजीमा हुन्छन् जसले यिनीहरुलाई पुरा तरिकाले बुझ्न सकोस् र उनीहरुलाई हरेक मोड मा समर्थन गर्न सकोस्। यिनीहरु चाहन्छन् कि उनको पार्टनर पैसावाला होस् ताकि उनीहरुका सबै आवश्यकताहरु पूरा गर्न सकुन् ।
मंगल देवका मानिसहरु वृश्चिकलाई मात्र पैसाको लागी माया गर्छन्। यिनीहरुलाई अरु लाई आकर्षित गर्न धेरै राम्रो तरीका आउँछ। साथै, यस राशिका मानिसहरु अलिकति लोभी हुन्छन्, यस्तो स्थिति मा, यिनीहरु आफ्नो लागी पैसा वाला पार्टनर खोज्दछन् ।
यस राशिका मानिसहरु सधैं टप मा रहन मन पराउँछन् र यिनीहरु कहिल्यै हार मान्दैनन्। यिनीहरु प्रतिस्पर्धामा भाग लिन मन पराउँछन् र सधैं जित्ने बारे सोच्छन्। यिाीहरुको प्रेम जीवन को बारे मा कुरा गर्ने हो भने यिनीहरु आफुलाई माया गर्ने साथसाथै पैसा धेरै हुने लाइफपार्टनर खोन्दछन् ।
बृहस्पति देवका मानिसहरु अर्थात धनु राशिका व्यक्तिहरु एडभेन्चर र थ्रिलर मनपराउँछन् । यस्तो स्थिति मा, यिनीहरु सधैं आफैं को लागी एक यस्तो साथी खोज्दैछन्, जोसँग राम्रो पैसा होस् र उनीहरुलाई सबै चीजहरु सजिलै सँग मिलोस् । यिाीहरुलाई सधैं यात्रा को लागी मनपर्छ, विशेष गरी हिल स्टेशन गएर घुम्न मन पराउँछन्
धनु राशि को मानिसहरु नयाँ चीजहरु हेर्न र नयाँ चीजहरु को प्रयास गर्न मन पराउँछन्। उनीहरुका सपनाहरु धेरै ठूला हुन्छन्र यी सपनाहरु लाई पूरा गर्न को लागी, यिनीहरु पैसावाला जिवनसाथी खोज्छन्। यस्तो अवस्थामा धनु राशिका मानिसहरु पैसाको लोभी हुन्छन् भन्नु गलत हुनेछैन । नयाँ पुस्ता बाट सभार